Waa maxay AUR iyo sida loogu suurtageliyo Arch Linux iyo noocyo kala duwan | Laga soo bilaabo Linux
Waa maxay AUR iyo sida loogu suurtageliyo Arch Linux iyo noocyo kala duwan
Halkan blogga marar badan waxaan ka hadlaynay rakibaadda qalabka qaar ama codsiyada guud ahaan Linux, iyon kuwaas oo inta badan iskudaya inay ku daraan qaybinta ugu caansan.
Dhexdooda waxaan badanaa ku daraa Arch Linux iyo waxyaabaha ka dhasha. In kasta oo aan jeclaan lahaa inaan ka hadlo kaliya mid gaar ah, hadana kama tagi karo kuwa kale, maxaa yeelay aakhirka waxay leeyihiin isku aasaas.
In badan oo ka mid ah qoraalladan waxay guud ahaan ku talinayaan in laga rakibo AUR iyo in la isticmaalo "AUR helper" si loo sameeyo.
Wixii kuwa Akhristayaasha aan ka warqabin tan, wax yar ayaan uga hadli doonaa maanta.
Kuwaas oo kala ah Isticmaalayaasha Linux oo in muddo ah la isticmaalayo, waa inay aqoonsadaan ereyga "bakhaar" taas oo si fudud u ah isha software.
Tani macnaheedu waa inay tahay meel lagu keydiyo oo laga heli karo baakado softiweer ah oo ku rakibo kombiyuutarka.
Bakhaar (sidoo kale loo yaqaan bakhaar) waxaa loo kala saari karaa laba nooc: keyd rasmi ah iyo keyd ay ku hayaan dhinacyada saddexaad (isticmaale) isticmaale kasta.
Sida iska cad, ilaha rasmiga ee rasmiga ah ayaa horay loogu sii rakibay Arch Linux, Manjaro, Antergos ama qeybinta kasta oo ka soo baxda Arch Linux.
Dhinaca kale, waxaa jira Keydadka Arkiifiinta Arkaynta (AUR)waa maxay meel lagu kaydiyo bulshada loogu talagalay Arch Linux iyo noocyadeeda.
Sida keydka rasmiga ah, waxay sidoo kale kujiraan sharraxaad xirmo (PKGBUILD) oo laga soo ururin karo ilaha laga sameeyo makepkg kadibna lagu rakibo pacman. AUR waxay ujirtaa inay la wadaagto xirmooyinka cusub bulshada.
1 Ku rakibidda iyo ka-saarista barnaamijyada
1.1 Awood u siinta AUR ee Arch Linux iyo waxyaabo kale
Ku rakibidda iyo ka-saarista barnaamijyada
Si aad ugu rakibto codsiyada nidaam kasta oo Arch Linux ah oo ku saleysan ama laga soo qaatay waxaad "ku dari kartaa / ka saari kartaa barnaamijka tan waxaa guud ahaan laga sameeyaa terminaalka iyadoo la kaashanayo Pacman.
In kasta oo jawiga desktop-ka qaarkood, badanaa waxay ku daraan qalab kaa caawinaya inaad rakibto ama aad tirtirto codsiyada.
Xaaladdan oo kale waxaan sidoo kale adeegsan karnaa aalad caan ah oo loo yaqaan Octopi, taas oo ah qaab muuqaal ah oo loo yaqaan 'Pacman interface' oo loo yaqaan 'Pacman interface' kaas oo sidoo kale noo oggolaanaya inaan la falgalno AUR.
Awood u siinta AUR ee Arch Linux iyo waxyaabo kale
Si aad awood ugu yeelato inaad ku darto taageerada AUR nidaam kasta oo ka soo baxa Arch Linux oo ay ku heli karaan kumanaan codsiyo ay abuureen oo ay dayactireen bulshada.
Iyadoo la tixgelinayo in barnaamijyadan ay yihiin kuwo bulshada wada, ma aha in dhammaan barnaamijyada si joogto ah loo cusbooneysiiyo.
Xaqiiqdii, waxaa jira codsiyo dhowr ah oo aan la cusbooneysiinin wax ka badan 5 sano. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fogaato barnaamijyadan oo kale maxaa yeelay waxay sababi karaan arrimaha xasilloonida nidaamka iyo xaaladaha ugu xun ee ay sidoo kale soo bandhigi karaan khataraha amniga.
Si taas loo suurtageliyo, dWaa inaan kudarno khadadka feylkeena pacman.conf, kaasoo aan kudarineyno khadadka soo socda dhamaadka feylka.
Kaliya fur terminal oo ku saxo nano ama tifaftiraha qoraalka aad jeceshahay:
Y waxaan ku darnaa dhamaadka:
Hadda tan la sameeyey, waa inaan fulinnaa amarka soo socda, Si loo waafajiyo keydka macluumaadka iyo keydka lagu daray nidaamka:
Tan ayaa hadda la sameeyay waa inaan rakibnaa kaaliye si aad nooga caawiso inaanu rakibno codsiyada laga helo gudaha AUR, tan waxaad kala tashan kartaa qodobka soo socda halka aan kugula talinayo mid.
Waxay sidoo kale dooran karaan inay isticmaalaan hal maamule softiweer oo iska ilaali inaad isticmaasho qadka amarka, sida aan soo sheegay Octopi, taas oo ah qalab maarayn xirmo oo aad u fiican oo loogu talagalay Arch Linux iyo waxyaabo kala duwan.
In kastoo Waxaan shaqsiyan kugula talin lahaa inaad sida ugu macquulsan u isticmaasho terminal-ka, maadaama sidan oo kale ay bilaabi doonaan inay la qabsadaan amarrada iyo inay bartaan maamulida, wax ka beddelka, cusboonaysiinta iyo maamulida nidaamkooda.
Xitaa hoos u dhig, ka saar jawiga garaafka, oo dib u dhis nidaamka iyo wax ka badan.
Tani waa mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee aan ka jeclahay Arch Linux maxaa yeelay xitaa haddii aad lumiso jawiga garaafka, haddii aad adigu ka soo rakibtay xoqidaada, waxaad si fudud u ogaan doontaa waxa la sameeyo si aad mar kale uga soo kabato
Taasi, oo ka duwan nidaamyada kale, dadka isticmaala way waalaan qaar badan oo iyaga ka mid ahna waxay doortaan inay dib u rakibaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Waa maxay AUR iyo sida loogu suurtageliyo Arch Linux iyo noocyo kala duwan
samee Bilaha 9
Ninka ayaa u qaadanaya inaad isla garaneyso wuxuu garanayo, markaa waad aqrisaa isaga, waxaadna u soo baxeysaa sida kalluumeysiga ah ee wixii aad soo gashay
Tafatir faylka, waxay dhahdaa, archlinuxfr ma kujiraa qaansooyin? Ma u heli doonaa cinwaan ahaan? Miyay tahay inaan ka saaro calaamada #? Qadka soo socda miyuu sameeyaa (Server = http://repo.archlinux.fr/$arch) xagee dhigaa? Meel bannaan? markan waxaad ka qoomameyneysaa inaad waqti lumisay
Ku jawaab emerson
IssueHunt: waa madal cusub oo loogu talagalay maalgelinta isha furan
Fedora 29 Beta ayaa la sii dayn doonaa usbuuca dambe